कस्तो अचम्म ! जन्मेको ३ महिनामै यति राम्रो नेपाली बोल्न थाले यी जुम्ल्याहा बच्चा (हेर्नुस् भिडियो ) – Purba Aawaj
कस्तो अचम्म ! जन्मेको ३ महिनामै यति राम्रो नेपाली बोल्न थाले यी जुम्ल्याहा बच्चा (हेर्नुस् भिडियो )
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २९, २०७८ समय: १०:३०:२०
कुनै बेला निकै चर्चामा आएकी छेकी शेर्पा अहिले भने दुई जुम्ल्याहा छोरा जन्माएर कोठामा बस्दै आएकी छिन ।
कमल भुजेलसगँ बिबाह गरेकी छेकी शेर्पा अहिले साथमा श्रीमान नहुदाँ दुई बच्चालाई हुर्काउँन निकै गार्‍हो भएको बताउँछिन ।
कमल भने करिव दुई महिनादेखी कामको शिलशिलामा बाहिरै बस्दै आएका छन । अहिले आफुलाई दुई छोराको स्याहार गर्न निकै मुस्किल परेको उनी बताउँछिन ।
दुई जनालाई आफ्नो दुधले नपुग्ने भएकोले गर्दा पनि बाहिरबाट किनेर ल्याउन आर्थिक अवस्थाका कारण गार्‍हो भएको उनि बताउँछिन ।
पहिले त सबैले सहयोग गरिदिनु भएकोले ल्याक्टिजिन लगायत ल्याएर खुवाउने गरेको भएता पनि अहिले भने गाईको दिनहु एक लिटर ल्याएर खुवाउने गरेको उनले बताईन ।
उनले अझ अर्को अचम्को कुरा पनि बताईन, ३ महिना पुगेका ती बच्चाहरुको बोली समेत आईसकेको छेकिले बताएकी छिन । उनिहरु बिहान उठेर बुबु, ममि, बाबा इत्यादि भन्ने गरेको उनले बताईन । सामान्यतया ३ महिनाको बच्चा यताउता पल्टिन पनि सक्दैन । तर यी दुई बच्चाहरु भने बोल्न थालेको उनले बताईन ।
घरमा दिदिबहिनी तथा आमाकै कुरा सुनेर छेकिका पहिलेका श्रीमानले पनि आफुलाई राम्रो नगरेको छेकिले यश अघि बताएकी थिइन । उनलाई सासू तथा नन्दाअमाजुले आफ्नो छोरा तथा भाईको जिवम बर्बाद बनाइदिएको भन्दै दुख दिने गरेको घर छाडेको बताएकी थिइन ।भिडियो हेर्नुस्:
मिडिया 24 नेपाल बाट
Last Updated on: December 15th, 2021 at 10:30 am